Imandarmedia.com.np: थाहा पाउनुहोस् किन चिलाउँछ हत्केला, पैसा प्राप्त हुन्छ या गुम्छ ?
Lifestyle » थाहा पाउनुहोस् किन चिलाउँछ हत्केला, पैसा प्राप्त हुन्छ या गुम्छ ?
थाहा पाउनुहोस् किन चिलाउँछ हत्केला, पैसा प्राप्त हुन्छ या गुम्छ ?
हत्केला शरिरको संवेदनशील अंगमध्ये एक हो । यो सबै भन्दा बढी प्रयोग वा उपयोगमा आउने अंग हो । त्यसैले हत्केला चिलायो भने यसले हाम्रो दैनिक गतिविधिलाई नै प्रभावित पार्छ ।
स्वास्थ्य खबरका अनुसार हत्केला चिलाउने समस्यालाई पैसा प्राप्त गर्ने वा गुम्ने परम्परागत मान्यतायसँग पनि जोडिएको पाइन्छ । हत्केला चिलाउनु पैसासँग कुनै साइनो छैन । हत्केला चिलाउनु रोग नभए पनि विभिन्न तत्वहको परिणाम हो वा रोगको संकेत हो ।